नेपाल आज | पूँजीवादले बलात्कार गर्छ ? भन्ने प्रश्नमा एक समाजशास्त्री हाँसे
पूँजीवादले बलात्कार गर्छ ? भन्ने प्रश्नमा एक समाजशास्त्री हाँसे
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पूँजीवादका कारण बलात्कार बढेको अभिव्यक्तिलाई लिएर मानिसहरुले मजाक उडाउन थालेका छन् । गृहमन्त्रीले केही अध्ययन गरेरै बोलेका होलान् भन्ने ठाउँ पनि रहन्छ । तर चुरो प्रश्न उब्जेको छ कि के वास्तवमा पूँजीवादले बलात्कार बढ्छ ? समाजशास्त्री प्रोफेसर केडी मिश्र हाँस्दै भन्छन्, ‘मैले यतिका वर्ष कलेजमा अध्यापन गराएँ, कैयन अन्तर्वार्ता दिएँ, तर यस्तो प्रश्नको सामना कहिले पनि गर्नु परेको थिएन । बलात्कारका कैयन कारण हुन्छन् । तर पूँजीवाद पनि एक कारक हो भन्ने पहिले पटक मन्त्रीबाट सुने ।’ प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सार संक्षेपमाः
प्रा. मिश्र, के पूँजीवादले बलात्कारका घटना बढाउँछ ?
– गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अनुसार त बढाउँछ । तर सामाजशास्त्रीय दृष्टिले बलात्कार हुनुको कारक एक वा केही मात्रै हुँदैनन् । यसका बहुआयाम हुन्छन् ।
बलात्कार हुने ती बहुआयामहरु चाहिँ के के हुन् त ?
–वर्तमान समाज हेर्ने हो भने त सूचना प्रविधिको विकास र यौनचाहना वृद्धि गराउने सामाग्रीहरु पनि हुन् । तर बलात्कार पहिले पनि हुन्थ्यो । भविष्यमा पनि हुनेछ । मानसिक अवस्था, गरिबी–अज्ञानता, दमित यौन चाहना आदिका कारण यस्तो हुन्छ ।
पूँजीवादले बलात्कार बढाउने भए, अमेरिकामा घरघरमै बलात्कारीहरु हुनु पर्ने होइन र ?
–(हाँस्दै) गृहमन्त्रीजीको कुरा पत्याउने हो भने त त्यस्तै हो । गृहमन्त्री जस्तो मान्छेले बोलेपछि केही त पत्याइदिनु पनि पर्ला कि !
पूँजीवादी व्यवस्था भनेको के हो ?के गृहमन्त्रीले पूँजीवाद नबुझ्नु भएको हो ?
– हेर्नुस्, पूँजीवाद अर्थात क्यापिटलिज्म यो एक अर्थ व्यवस्था हो । क्यापिटलिज्म नै आर्थिक विकास गर्ने राम्रो प्रणाली हो । पूँजी जम्मा गर्ने, त्यसलाई लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने यो प्रणाली नराम्रो होइन । गृहमन्त्रीजीले पूँजीवादको एकोहोरो विरोध गर्न सिक्नु भयो, सिकाउनु भयो । तर पूँजीवाद बुझ्नु भएन ।
मन्त्री भइसकेपछि सबैकुराको ज्ञाता हुनुपर्छ भन्ने छ नी हाम्रा नेताहरुलाई ?
–सहि भन्नु भयो । मन्त्री भनेका श्रीमान् सर्वज्ञ होइनन् । मन्त्री हुनेबित्तिकै सबै कुरा जान्न जरुरी छैन । नजानेको कुरा सल्लाहकार राखेर सिकेर बोल्नु पर्छ ।
मन्त्रीहरुलाई पढेका बुझेका उनीहरुका सल्लाहकार, सचिवहरुले किन सिकाउँदैनन् ?
–मन्त्रीको प्रिय हुनका लागि मन्त्रीले जे जे भन्छन् त्यसमा ‘हो मा हो’ मिलाउँछन् । राजतन्त्रमा राजाले जे बोले पनि दिव्यवाणी हुन्थ्यो । जे बोल्यो त्यही कानुन जस्तो । राजसंस्था हुँदाको चाकडीको चलन अझै छ ।
यस्तो हालत गृहमन्त्रीको मात्रै देख्नु भएको छ कि अरुको पनि छ ?
–सबैका सब उही छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको हालत उस्तै लाग्छ । एकजना मन्त्रीले भन्दै थिए कि कृषिमा अब क्रान्ति आउँछ रे । कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रे । उत्पादन फंक्सन नै नबुझेकाहरुले जे पनि बोलिदिन्छन् । उत्पादन वृद्धिका लागि भूमि, लगानी, श्रमिक चाहिन्छ । कृषिमा काम गर्ने श्रमिक नै छैनन् अहिले । अनि कहाँबाट हुन्छ उत्पादन वृद्धि ? यस्ता सामान्य ज्ञान मन्त्रीहरुले राखेर बोल्नु राम्रो ।